Liibiyaattii haleellaa xiyyaaraan doktaroonni shan ajjeefaman - BBC News Afaan Oromoo
Liibiyaattii haleellaa xiyyaaraan doktaroonni shan ajjeefaman
29 Adooleessa 2019
Hospitaala kibba magaala guddoo biyyattii Triipoolitti argamuttti haleellaa xiyyaaraan raawwatameen dokataroonni shan ajjeefamuu mootummaan Liibiyaa deeggarsa Dhaabbata Biyyoota Gamtoomanii qabu beksise.
Xiyyaara waraanaa kan Janaraala Khaliif Haftaar( kan mootummaa biyyattii waraanaa jiru) fi hoogganaa Waraana Biyyaalessaa Liibiyaati(LNA) jedhame haleellaa kana raawwachuu Ministeerri Fayyaa ibseera.
Waraanni kun haga ammaatti yaada hin laanne.
Bara 2011tti, hoogganaan biyyattii baroota dheeraa Mo'ammar Gaadaafii aangoorraa erga buufamanii ajjeefamanii booda biyyattiin tasgabbii dhabdeetti.
Buufati godaantotaa Liibiyaa haleelamuun namoonni 40 du'an
Hidhattootni Korporeshinii boba'aa Liibiyaa haleelan
Liibiyaa keessaa baqattoota 'baasuufi'
Ebla darberraa kaasee mootummaa Liibiyaa (Mootummaa Waliigaltee Biyyaalessaa) kan deeggarsa idil addunyaa qabu fi kan Ministira Muummee Fayez al-Sarrajiin hoogganamuu fi garee Khaliif Haftaar gidduutti waraan adeemaa jiruun hanga ammaa lubbuun namoota 1,100 darbuu Dhaabbatni Fayyaa Addunyaa himeera.
Naannoo bakka dhalootaa Mo'ammar Gaadafiirraaa deeggarsa guddaan gara qarqara Triipoliitti kan siiqan gareen Haftaar amma haleellaa qilleensaan qarqaruma magaala Triipoliitti wal waraanaa jiruu jedha AFP'n.
Haleellaa Sanbataa kanaan lubbuu baraartota dabalatee namoonnii torba madaa'aniiru.
Akka AFP'n gabaasetti, Kibba magaala Triipooliitti hospitaalota irratti haleellaan xiyyeefate yoo raawwatamu kun yeroo sadaffaafi.
Ji'a darbe bakka baqattootni biyyoota Afrikaa hedduun itti argamanitti halellaa xiyyaaraa raawwatamee lubbuu godaantota 50 tilmaamamu galaafatera jedhamef mootummaan biyyattii garee Khaliif komateera.
Gareen kun gama isaan jalqaba waraana mootummaa deeggaran haleeluufi haaloo bahuuf haaleellaa qaamoolen kunniin bananiin dogoggoraan buufata kana rukutuu hin oolan jechuun komii irratti ka'e haalera.
Haleellaa Liibiyaa: Buufata godaantotaa Liibiyaatti namoonni 40 du'an
3 Adooleessa 2019
Jeequmsa Liibiyaa: Hidhattootni gamoo korporeeshinii boba'aa Liibiyaa haleelan
10 Fuulbana 2018
Baqattoota Liibiyaa: Sagantaa hatattamaan baasuu irratti walii galame
30 Sadaasa 2017
'UN' manneen hidhaa godaantotaa Liibiyaa haa cufaman jedhe
15 Adooleessa 2019
Rakkina Libiyaa: Osoo kumaatamni walitti bu'iinsa baqatanii buufanni xiyyaaraa haleelame
Liibiyaatti godaantonni doonii lubbuu isaanii baraarte ugguran
28 Bitooteessa 2019
Namoota gara Awurooppaatti karaa seeraan alaan dabarsan 205 ta'an irratti Liibiyaan ajaja hidhaa dabarsite
15 Bitooteessa 2018
'Waan nu xiqqeessinee eegalle Oromoon haa guddifatu'
Humni waraanni Sudaanfi warreen sivilii waliigaltee malatteessan
Dorgommii kalaqaa bara kanaan eenyutu mo'ata laata?
Lammileen Chaayinaa dhoksaan dhugaatii alkoolii aadaa omishan to'ataman
'Nageenya keenyaaf ammallee wabii hin qabnu'
'Sirni eebba albamii Oromoo alanaa abdii guddaa natti horeera'
Huawei'n himannaa Afriikaa basaasuu jedhu haale